? => NH3 (ammooniya) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = NH3 | Isu dheellitirka Kiimikada
? = ammonia
Natiijooyinka 156 helay
Muujinta isleeg ka 41 ilaa 45 Bogga 9 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
6H2O + Mg3N2 → 3Mg (OH)2 + 2NH3
6 1 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6H2O + Mg3N2 → 3Mg (OH)2 + 2NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ay kaga falceliyaan Mg3N2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Mg(OH)2 () iyo NH3 (ammonia)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Mg3N2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6H2O + Mg3N2 → 3Mg (OH)2 + 2NH3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Mg3N2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Mg3N2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mg3N2 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Mg(OH)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Mg(OH)2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Mg(OH)2 () badeecad ahaan?
Ca3N2 + 3H2O → 3Ca (OH)2 + 2NH3
biyaha kaalshiyamka hydroxide ammonia
1 3 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3
What is reaction condition of Ca3N2 () reacts with H2O (water) ?
How reactions can happened and produce Ca(OH)2 (calcium hydroxide) and NH3 (ammonia) ?
Phenomenon after Ca3N2 () reacts with H2O (water)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3
Questions related to reactant Ca3N2 ()
What are the chemical and physical characteristic of Ca3N2 ()? What are the chemical reactions that have Ca3N2 () as reactant?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ca(OH)2 (calcium hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ca(OH)2 (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ca(OH)2 (calcium hydroxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Falcelinta hal-beddelka ah
C2H2 + 2 [Ag (NH3)2] OH → H2O + NH3 + C2Ag2
acetylene biyaha ammonia Diargentio (I) acetylene; Qiiqa acetylide; Ethynylenebis [qalin (I)]; Ethynylenedisilver (I)
(kh) (dd) (lng) (kh) (rnn)
(xoog leh) (jacayl, daacadnimo)
1 2 1 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C2H2 + 2 [Ag (NH3)2]H → H2O + NH3 + C2Ag2
Waa maxay xaalada falcelinta ee C2H2 (acetylene) ay kaga falceliso [Ag(NH3)2]OH ()?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo C2Ag2 (Diargentio (I) acetylene; Silver acetylide; Ethynylenebis[silver (I)]; Ethynylenedisilver (I))?
Dhacdada ka dib C2H2 (acetylene) waxay la falgashaa [Ag(NH3)2]OH ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C2H2 + 2 [Ag (NH3)2]H → H2O + NH3 + C2Ag2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C2H2 (acetylene)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2H2 (acetylene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H2 (acetylene) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta [Ag(NH3)2]OH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee [Ag(NH3)2]OH ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh [Ag(NH3)2]OH () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada C2Ag2 (Diargentio(I)acetylene; Silver acetylide; Ethynylenebis[silver(I)]; Ethynylenedisilver(I))
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C2Ag2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2Ag2 (Diargentio(I)acetylene; Silver acetylide; Ethynylenebis[silver(I)]; Ethynylenedisilver(I)) badeecad ahaan?
KOH + NH4MAYA3 → H2O + KNO3 + NH3
potassium hydroxide amooniyam amooniyam biyaha amooniyam haadi ammonia
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta KOH + NH4MAYA3 → H2O + KNO3 + NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee KOH (potassium hydroxide) waxay la falgashaa NH4NO3 (ammonium nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo KNO3 (potassium nitrate) iyo NH3 (ammonia)?
Dhacdada KOH ka dib (potassium hydroxide) waxay la falgashaa NH4NO3 (ammonium nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada KOH + NH4MAYA3 → H2O + KNO3 + NH3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta KOH (potassium hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KOH (potassium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KOH (potassium hydroxide) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NH4NO3 (ammonium nitrate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NH4NO3 (ammonium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4NO3 (ammonium nitrate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (ammonium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xiriira badeecada KNO3 (potassium nitrate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee KNO3 (ammonium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KNO3 (potassium nitrate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (ammonium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
CH3COCl + 2C2H5NH2 → NH3 + C2H5Cl + CH3CONHC2H5
chloride acetyl ethylamine ammonia N-Ethylacetamide
(lng) (dd) (kh) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COCl + 2C2H5NH2 → NH3 + C2H5Cl + CH3CONHC2H5
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3COCl (acetyl chloride) ay kaga falceliso C2H5NH2 (etylamine)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NH3 (ammonia) iyo C2H5Cl () iyo CH3CONHC2H5 (N-Ethylacetamide)?
CH3COCl waxay la falgashaa C2H5NH2
Dhacdada ka dib CH3COCl (acetyl chloride) waxay la falgashaa C2H5NH2 (etylamine)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga CH3CONHC2H5 (N-Ethylacetamide), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda C2H5NH2 (ethylamine), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COCl + 2C2H5NH2 → NH3 + C2H5Cl + CH3CONHC2H5
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH3COCl (acetyl chloride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COCl (acetyl chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COCl (acetyl chloride) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C2H5NH2 (ethylamine)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C2H5NH2 (etylamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H5NH2 (etylamine) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NH3 (etylamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C2H5Cl ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C2H5Cl (etylamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H5Cl () badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH3CONHC2H5 (N-Ethylacetamide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CONHC2H5 (etylamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CONHC2H5 (N-Ethylacetamide) alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 41 ilaa 45 Page 9